U-Apple uhlaziya icandelo lezipho zakhe kumsitho woMhla woMama | Ndisuka mac
U-Apple uhlaziya icandelo lezipho kumhla woMhla woMama
Kwimeko yokungabikho kwe ngenyanga nje yoSuku loMama, uApple wenze into ekhethekileyo kwicandelo lezipho zakhe (Izipho) ukucebisa ezinye zeemveliso zenkampani yaseCalifornia esinokuthi siyinike umama wethu ngolu suku lubaluleke kangaka.
Nangona abanye, uSuku looMama lusuku nje oluqhelekileyo apho ubumbano kubathengi jikelele lukwazile ukufumana enye indawo kwikhalenda, kuyinyani ukuba lolunye lweyona mibhiyozo ingene nzulu kuluntu lwanamhlanje, kwaye U-Apple uthathe inxaxheba kuyo kwaye uyayazisa ngaphezulu kweminyaka esi-7.
Eli phepha, kumsitho okhethekileyo woSuku loMama nge-17 kaMeyi, libizwa ngokuba yivenkile yezipho njenge «Ilungele uSuku loMama. Kwaye wonke umntu », njengoko sibona kumfanekiso wentloko.
Kweli candelo likhethekileyo kwiwebhusayithi esemthethweni yeApple, yenza ukukhankanywa okukhethekileyo kokunyuswa kunye neemveliso ezinokuba luncedo xa sinika izipho kumama wethu. Phakathi kwazo, i-iPad Pro, iApple Watch, okanye iiBeatsX iihedfoni, kunye nezixhobo zezi ntlobo zeemveliso ezinje ngePensile yeApple, imitya emitsha yeWatch, njl. Ukongeza, sinokubona iingcebiso ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwinto esiyifunayo:
Ii-headphone kunye nezithethi.
Nangona kusekutsha ukucinga ngalo mhla, kungcono ukuba kulo nyaka singabanjwa yinkunzi kwaye ekugqibeleni singasifumani isipho. Kunyaka ophelile, U-Apple ukwapapashe isibhengezo esikhethekileyo ngalo mhla njengenxalenye yokuqokelelwa kwaso "Udubule i-iPhone". Siza kubona ukuba yintoni enye abafana baseCupertino abasigcinele yona kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple uhlaziya icandelo lezipho kumhla woMhla woMama
Yonwabela, okanye usokole, kuxhomekeke kwindlela ojongeka ngayo, iMacOS 7.0.1 ngale nkqubo